एक स्टप स्विमिंग पूल सेवा - महान पूल
GREATPOOL डिजाइन, पोखरी उपकरण आपूर्ति र निर्माण प्राविधिक सहयोगको लागि व्यापक सहायताको साथ परामर्श सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। हाम्रो अनुभवी टोलीले हामीलाई एउटा प्रस्ताव प्रस्ताव गर्न सक्दछ पूल डिजाइन, निर्माण, पोष्ट-निर्माण, उपकरण स्थापना र प्रदर्शन कन्फिगरेसन, प्रोजेक्ट बिडिंग र प्रि-डिजाईन सेवाहरूको पूरा समाधान।
तपाइँको आवश्यकता बारे GREATPOOL मा कुरा गर्नुहोस्
पौंडी पोखरी डिजाइन
उपकरण र प्रणालीहरूको चयनमा सहयोग प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको पोखरी परियोजनाको लागि एक अर्काको पूरक हुन्छ
पौंडी पोखरी निर्माण टेक्निकल समर्थन
सही डिजाइनहरू, प्रणालीहरू र निर्माण विधिहरू छनौट गर्दा हामीले तपाईंको पूल परियोजनाको लागि के गर्न सक्दछौं!
तपाइँको लागि तयार पूल समाधान डिजाइन
यदि तपाईं GREATPOOL चयन गर्नुहुन्छ, तपाईंको विचार र लक्ष्यहरू पोइन्ट हुन् जहाँबाट हाम्रो टीमले काम गर्ने छ।
विगत २ years बर्षमा हामीले स्विमिंग पूल उपकरण निर्माण र स्विमिंग पूल प्रोजेक्टमा टेक्निकल अनुभवको समृद्ध अनुभव संचित गरेका छौं। तपाईले पठाउनु भएको आर्किटेक्चरल डिजाइन रेखाचित्रका अनुसार हामी स्विमिंग पोखरी, उपकरण समर्थन र टेक्निकल स्थापनाको गहन डिजाइनका लागि एक स्टप समाधान प्रदान गर्दछौं। तपाईंलाई सजिलै र प्रभावकारी ढ mas्गले मेसनहरू, प्लम्बरहरू, इत्यादि संग स्विमिंग पूल निर्माण गर्न, जबकि स्विमिंग पूल निर्माण लागत घटाउने।
आज सुरू गर्नुहोस्
एक पूल सेवा कार्यान्वयन गर्न चरणहरू
चरण १: हामीलाई तपाईंको वास्तु डिजाइन चित्रहरू पठाउनुहोस्
विचारहरूको आदानप्रदान आवश्यक छ। तपाईंको उत्तरले हामीलाई तपाईंको आवश्यकता र तपाईंको पोखरी परियोजनाको लागि तपाईंको इच्छाहरू पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ।
हामी तपाईंलाई साइटको योजना, साथ साथै साइटको फोटोहरू र भूमि र घरको दृश्यहरू पठाउन सोध्छौं। यसलाई अनुसरण गर्दै, हामी तपाईंलाई हाम्रा शुल्क उद्धरणको साथ सहयोगका लागि विस्तृत प्रस्ताव पठाउनेछौं।
चरण २: हामी तपाईंको लागि सम्बन्धित पूल ड्रईings्गहरू बनाउँछौं
पाइपलाइन एम्बेडिंग चित्रहरू
पौंडी पोखरीको फ्लोर प्लानमा, हामी पौंडी पोखरीको फिटिंग र मेशीन कोठाको बिभिन्न पाइपलाइन रूपरेखा विस्तृत रूपमा चिन्ह लगाउँदछौं।
उपकरण कोठा लेआउट
यो तपाईंको स्थापनाको मूल हो। मेशिन कोठाको सटीक आकारको अनुसार डिजाइन गरिएको ड्राइंग मेशिन कोठामा सबै पाइप, आवश्यक वाल्भ र उपकरण देखाउँदछ। आवश्यक भल्भहरू प्रदान गरिएको छ र तिनीहरूको स्थानहरू स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाइएको छ। प्लम्बरहरूले मात्र डिजाइन रेखाचित्रको अनुरूप निर्माण र स्थापना पूरा गर्न आवश्यक छ।
आज सुरु गर्नुहोस्!
चाहे हामी प्रारम्भिक डिजाइन प्रदान गर्दछौं वा अवस्थित विचारहरूको साथ काम, GREATPOOL सेवाको अभूतपूर्व निरन्तरता प्रदान गर्दछ, जसले तपाईंको समय र पैसा बचाउनेछ।
चरण:: हामी उपकरण सामग्री सूची र उद्धरण प्रस्ताव गर्न सक्छौं
प्रत्येक क्षेत्रको विशिष्ट सर्तहरूको लागि, हामी उपकरणहरूको सूची प्रदान गर्दछौं जुन स्थानीय क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ र वातावरणीय संरक्षण, ऊर्जा बचत, र लागत-प्रभावकारितामा आधारित छ।
पोखरी उपकरण प्रणाली
हामी एक उपकरण निर्माता हो र उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादनहरु को एक मूल्य लाभ छ कि स्थानीय ठेकेदारहरु संग छैन।
STEP4: हामी तपाईंलाई निर्माण र स्थापना टेक्निकल मार्गदर्शन दिन सक्छौं
हाम्रो टोलीसँग १ years बर्ष भन्दा बढी निर्माण अनुभव सहित परियोजना व्यवस्थापकहरू छन् यस परियोजनाको अनुसरण गर्न र टेक्निकल मार्गदर्शन प्रदान गर्न
स्विमिंग पूल सेवाको बारेमा FAQ
किन ठूलो पोखरीको मद्दत खोज्नुहुन्छ?
हामी स्विमिंग पूल उद्योगमा सब भन्दा उन्नत उपकरण र टेक्नोलोजीको साथ हाम्रा ग्राहकहरूसँग आफ्नो विशेषज्ञता साझेदारी गर्दछौं। यो पौंडी उद्योगमा हाम्रो २ years वर्षको अनुभव हो। थप रूपमा, हामीले प्रदान गरेको प्रोग्राम डिजाइनले विश्वभरिका कामदारहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न र यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्न सक्दछ। हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो समाधानको कदर गर्नुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको लागत अनुमान गर्न के चाहिन्छ?
पहिलो सम्पर्क पछि, हामी तपाईंलाई हामीलाई प्लॉटको टोपोग्राफिक नक्शा पठाउन सोध्छौं र, सम्भव भए तपाईंको घर, भूखंड र पोखरी क्षेत्रको दृश्यहरूको फोटोहरू। तपाईलाई आवाश्यक पोखरी आकार र गहिराई र विकल्पहरू तपाईले चाहानु भएको पनि यकिन गर्नु पर्छ। Hours२ घण्टा भित्र, हामी तपाईंलाई प्रत्येक कार्य असाइनमेन्ट र हाम्रा शुल्कहरूको मात्राको बारेमा ईमेल पठाउनेछौं।
हामी पूल डिजाइन चित्र, पोखरी उपकरण आपूर्ति, स्थापना टेक्निकल मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्दछौं।
के तपाइँले हाम्रा सबै सेवाहरू स्वीकार्नुपर्दछ?
पक्कै छैन। हाम्रो सेवा: डिजाइन रेखाचित्र। उपकरण सूची। प्राविधिक मार्गदर्शन स्थापना। तपाईंको आवश्यकता अनुसार, तपाईं आफैले आवश्यक एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
डिजाइन पूरा गर्न कति समय लाग्छ?
यो अवश्य हाम्रो वर्कलोडमा निर्भर गर्दछ, तर औसत समय सीमा १० देखि २० दिन पछि हामीले तपाईंको कन्सेप्ट प्लानको लागि तपाईंको सहमति लिन्छौं।
यदि प्रोग्राम डिजाइन सन्तुष्ट छ भने, अब मैले के गर्नुपर्छ?
हाम्रो डिजाइन रेखाचित्रले तपाईंलाई एक्लै वा कारीगरहरूको साथ पौंडी पोखरीहरू निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। तर यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, हाम्रो कम्पनीको टेक्निकल टीम पनि साइटको लागि उपकरणको स्थापना मार्गदर्शन गर्न सक्दछ।
म कहाँ उपकरण र सामग्रीहरू किन्न सक्छु?
हाम्रो रेखाचित्र अनुसार, हामी तपाईंलाई फिल्टर सामग्री र उपकरणको एक सूची प्रदान गर्नेछौं। एकै साथ, हामी तपाईंलाई हाम्रो उपकरणको उद्धरण दिनेछौं। तपाईं यसलाई स्थानीय रूपमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। छनौट तपाईंको हो
एक कामदार कसरी भेट्टाउने?
हामी तपाईंको क्षेत्रमा कामदारहरूसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्न सक्दछौं, उनीहरूलाई डिजाइन योजना अनुसार उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्, र उनीहरूको सुझाव उद्धरण जाँच गरेपछि तपाईंलाई पठाउँनुहोस्। तर अन्तिम विकल्प तपाईंको हो।
सार्वजनिक पौंडी पोखरी समाधान, पौंडी पोखरी समाधान, छत पुल सामान, पौंडी पोखरी सेवा, पौंडी पोखरी परियोजना, पौंडी पोखरी,